कारणहरू र ध्वनि प्रदूषणको परिणामहरू हरियो नवीकरणीय
आज विश्वको दुई तिहाई जनसंख्या ठूला सहरहरूमा बसोबास गर्दछ। शहरहरू भएको छ ठूलो आवाज को उत्सर्जन र ध्वनिक प्रदूषण को स्रोतहरु मा। शहरहरूमा आवाजको मुख्य स्रोत सडक यातायात हो। मोटर सवारी को यातायात, यातायात, यातायात जाम, सीs, आदि। तिनीहरू आवाज निकाल्छन् र मानवमा रोगहरू निम्त्याउन सक्छ।
विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) एक दिनको समय सीमा decdडेसिबल (dB) सेट गर्दछ ताकि यो स्वास्थ्यको लागि हानिकारक छैन। अझै लाखौं व्यक्ति प्रत्येक दिन उच्च स्तरमा उजागर हुन्छन्। यस स्थितिमा के गर्न सकिन्छ र उच्च आवाजको सतहमा निरन्तर जोखिमको जोखिम के हो?
1 ध्वनि प्रदूषण को विशेषताहरु
2 शहरहरूमा आवाज
2.2 मुटु समस्याहरु
2.3 समस्या सुन्दै
3 ध्वनि प्रदूषणले अधिक बिरामी मानिसहरूलाई उत्पन्न गर्दछ
4 आवाज र स्वास्थ्य स्तर
5 प्रकृतिको ध्वनि
6 शहरहरूमा ध्वनि प्रदूषणबाट कसरी बच्न सकिन्छ
ध्वनि प्रदूषण को विशेषताहरु
ध्वनि प्रदूषणको विशिष्ट विशेषताहरू हुन्छन जुन अन्य प्रदूषकहरू भन्दा फरक पार्दछ:
यो उत्पादन गर्न सस्तो प्रदूषक हो र उत्सर्जन गर्न एकदम थोरै ऊर्जा चाहिन्छ।
यो मापन गर्न र मापन गर्न जटिल छ।
यसले अवशेषहरू छोड्दैन, यसले वातावरणमा संचयी प्रभाव पार्दैन, तर यसले मानिसमा पार्ने प्रभावहरूमा संचयी प्रभाव पार्न सक्छ।
योसँग अन्य प्रदूषकहरूको तुलनामा सानो कार्यको दायरा छ, जुन यो एकदम विशिष्ट स्थानहरूमा अवस्थित छ।
यो प्राकृतिक प्रणालीहरूको माध्यमबाट यात्रा गर्दैन, जस्तै हावाबाट बहिएको प्रदूषित हवा, उदाहरणका लागि।
यो एक मात्र अर्थ द्वारा महसुस गरिएको छ: सुनुवाइ, जसले यसको प्रभावलाई कम महत्त्व दिन्छ। यो पानीको मामला होइन, उदाहरणका लागि, जहाँ यसको प्रदूषण यसको उपस्थिति, गन्ध र स्वादले देख्न सकिन्छ।
आवाज र ध्वनि प्रदूषण विशेषज्ञहरू तिनीहरू ती हुन् जसले शहरहरूमा ध्वनि स्तर मापन गर्छन् र ध्वनि नक्शा उत्पादन गर्छन्। तिनीहरू शहरको प्रत्येक क्षेत्रमा पाइने शोर लेभल स्थापना गर्दछन् र दिन र रात दुबै दिनमा उनीहरूले राम्रो स्वास्थ्य प्राप्त गर्नुपर्दछ।
रातमा भन्दा दिन कोठामा आवाज ठूलो हुन्छ। उच्च आवाजको सतहमा निरन्तर एक्सपोजरले बिरामी वा समस्याहरू निम्त्याउन सक्छ तनाव, चिन्ता, हृदय समस्याहरूको उपस्थिति र बच्चाहरूमा पनि समस्याहरू देखा पर्न सक्छन् जुन उनीहरूको सिक्ने प्रक्रियामा बिरामी छन्।
त्यहाँ उच्च आवाज स्तरसँग सम्बन्धित अन्य समस्याहरू पनि छन्:
उच्च रात्रि जीवनको साथ शहरहरूमा ठाउँहरू जस्तै बार, पब, डिस्को, भीड, आदि। तिनीहरू राती अबेर सम्म उच्च आवाजको सम्भावना बढी हुन्छ। यसले यी ठाउँहरूमा भएका मानिसहरूलाई निदाउन कठिनाई पैदा गर्दछ।। निद्रामा निरन्तर कठिनाई र केही घण्टा निद्राले अनिद्राको कारण दिन्छ। थप रूपमा, अनिद्राले मानसिक तनाव वा तनाव वा चिन्ता जस्ता विकृतिको उपस्थिति बढाउँदछ; साथ साथै प्रतिरक्षा प्रणालीको परिवर्तनहरू, बिर्सिनेहरू र सिक्ने कठिनाइहरू।
त्यहाँ अध्ययनहरू छन् जुन उच्च स्तरको क्षेत्रहरूमा देखाउँदछ आवाजले अस्पताल भर्ना बढेको छ।
WHO द्वारा सिफारिस गरिएको आवाजको अधिकतम स्तर दिनको 65 65dB हो। क्रोनिक दैनिक एक्सपोजर noise 80 dB वा तीव्र एक्सपोजर 85०-XNUMX dB माथि लामो समयसम्म ह्रदयको गडबडी पैदा गर्न सक्दछ, प्रभावितहरूलाई रोगका लक्षणहरू याद गरेन भने पनि। प्रभावितहरूलाई यो थाहा छैन किनकि शरीरले उच्च आवाजको स्तरमा प्रतिक्रिया गर्दछ नर्व हार्मोनहरू सक्रिय पार्दै रक्तचाप, मुटुको दर, भासकोण्टस्ट्रक्शन र रगतलाई घना बनाउने।
स्पष्ट रूपमा, वयस्कहरू अधिक संवेदनशील हुन्छन् र उच्च प्रकारको आवाजको स्तरमा दीर्घकालीन जोखिमको कारणले यस प्रकारको रोगको सिकार हुन्छन्।
जो मानिसहरू लगातार आवाज र उच्च आवाजको साथ ठाउँहरूमा विश्राम गर्ने ठाउँहरू सुन्ने चोटहरूको बढी सम्भावना हुन्छ। यी चोटहरूले भित्री कान र क्षतिको श्रवण कोषमा कोषहरू नष्ट गर्दछ।
सुनुवाई घाटाले परिणामहरू निम्त्याउँछ जसले हाम्रो दैनिक जीवनलाई असर गर्दछ, सामाजिक सम्बन्धमा बाधा उत्पन्न गर्दछ, शैक्षिक र कार्य प्रदर्शन घटाउँछ, अलगपन, एकाकीपन र उदासिनताको भावनालाई निम्त्याउँछ।
यसलाई रोक्नको लागि सिफारिस गरिन्छ:
हल्ला ठाउँहरू बेवास्ता गर्नुहोस्
उपयुक्त संरक्षकको साथ आफ्नो कान बचाउनुहोस्
टेलिभिजन र रेडियो एक मध्यम भोल्युममा सकियो
हेडफोन प्रयोग गर्दा, अधिकतम भोल्यूमको %०% भन्दा बढि नगर्नुहोस्
दिनको एक घण्टा भन्दा बढि उनीहरुको उपयोग भन्दा बढि नगर्नुहोस्
भोल्युम लिमिटरको साथ उपकरणहरू प्रयोग गर्नुहोस् ताकि स्वस्थ तहहरू पार गर्न नपरोस्
सवारी चलाउँदा अनावश्यक रूपमा हर्नको प्रयोग नगर्नुहोस्
संगीत कार्यक्रमहरूको दौरान स्पिकरबाट टाढा रहनुहोस्
ध्वनि प्रदूषणले अधिक बिरामी मानिसहरूलाई उत्पन्न गर्दछ
ध्वनि प्रदूषणको गहनता र मात्रा तुलना गर्न बार्सिलोना इन्स्टिच्युट फर ग्लोबल हेल्थ (ISGlobal) मा अध्ययन गरिएको थियो, "ला Caixa" बैंकिंग फाउन्डेशन द्वारा प्रवर्द्धित केन्द्र, जो अनुमान गरिएको छ, पहिलो पटक, यसको भार बार्सिलोना मा शहरी र यातायात योजना को कारण रोग।
सबै वातावरणीय कारकहरू मध्ये जसले नागरिकमा रोग सार्न सक्छ, यो ट्राफिकबाट आएको शोर हो जुन अत्यधिक मात्राको कारण गर्दछ, शारीरिक गतिविधि र वायु प्रदूषण को अभाव संग सम्बन्धित रोगहरु भन्दा उच्च।
यो अध्ययन पनि यस निष्कर्षमा पुगेको छ कि यदि बार्सिलोनाको शहरी ठाउँ र यातायातको राम्रो योजना थियो भने यसले एक बर्षमा ,3.000,००० भन्दा बढी मृत्युलाई स्थगित गर्न सक्दछ। थप रूपमा, यदि शारीरिक गतिविधि विकासको लागि अन्तर्राष्ट्रिय सिफारिसहरू पूरा भएको भए वायु प्रदूषण, आवाज र तातोको जोखिमलाई बेवास्ता गर्ने हो भने, प्रत्येक वर्ष हृदय रोगहरूको १,1.700०० मुद्दाहरूलाई रोक्न सकिन्छ, उच्च रक्तचापको १1.300०० भन्दा बढी घटनाहरू ,850० भन्दा बढी स्ट्रोक र depression740० अवसाद को मामलाहरु, अन्य बीचमा।
ध्वनि प्रदूषणको कारण वायु प्रदूषण भन्दा बढी रोगहरू हुन्छन्
आवाज र स्वास्थ्य स्तर
मानव कान अनुसार डेसिबल मा मापन आवाज को आकार छ:
0 सुनवाईको न्यूनतम स्तर
10-30 कम शोर स्तर कम कुराकानी बराबर
30-50 सामान्य कुराकानीको बराबर कम आवाज स्तर
55 औसतमा ध्वनिक आराम स्तर
65 डब्ल्यूएचओ द्वारा स्थापित ध्वनिक सहिष्णुताको अधिकतम अनुमत स्तर
65- 75 ट्राफिक, उच्च टेलिभिजनको साथ सडकको बराबर कष्टकर आवाज ...
75-100 कानको क्षति सुरु हुन्छ, असहज सनसनी र घबराहट पैदा गर्दछ
100-120 बहरापनको जोखिम
120 ध्वनिक दर्द थ्रेसोल्ड
140 मानव कानले सामना गर्न सक्ने अधिकतम स्तर
ध्वनि प्रदूषण, सहरी वातावरण र उच्च आवाज स्तरको साथ हामी प्रकृतिको आवाज बिर्सिरहेका छौं। धेरै व्यक्ति, पैदल यात्रा समेत, हेडफोन लगाउँदछन् र प्रकृतिको आवाजको आनन्दको सट्टा संगीत सुन्नेछन्।
एउटा चरा वा पानीको झरना हो कि उपहार वसन्तमा खस्ने प्रक्रियाको कारण हराइरहेको छ जुन एक प्रकारको बहिरापनजस्तै देखिन्छ। प्राकृतिक संसारको कोरसको शान्ति हराउने र वर्तमान पुस्ताको महत्त्व गुम्ने खतरामा छ, किनकि मानिसहरूले वरपरको आवाजलाई वेवास्ता गर्छन्।
पृष्ठभूमिमा आवाज को स्तर जुन केहि क्षेत्रहरुमा बढिरहेको छ मानिसहरुलाई केहि ध्वनिहरु बारे अनजान हुन सक्ने खतरा छ क्यानरीको गीत, खसेको पानी वा रूखहरूको पातहरूको डन्डा जब त्यहाँ बतास छ, जुन समय समयमा हरियो शहरी क्षेत्रहरूमा पनि सुन्न सकिन्छ।
यो पक्का किन हो भनेर निश्चित रूपमा अहिलेसम्म थाहा छैन, तर त्यहाँ अध्ययनहरू छन् जुन प्रकृयाले बनाएको ध्वनि सुन्ने पुष्टि गर्दछ यो स्वास्थ्यको लागि लाभदायक छ। दिमाग शान्त गर्नुहोस्, मांसपेशीहरूलाई आराम गर्नुहोस्, तनावबाट बच्नुहोस् आदि। यो हुन सक्छ किनभने लाखौं बर्षको विकासमा मानवले प्रकृतिको शान्त आवाजलाई सुरक्षासँग जोडेको छ।
शहरहरूमा ध्वनि प्रदूषणबाट कसरी बच्न सकिन्छ
सडक यातायात आवाजको सबैभन्दा ठूलो स्रोत हो, हामीले यसलाई कम गर्नमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्दछ। त्यहाँ धेरै पूर्वाधारहरू छन् जुन सडकमा निर्माण गरिएको छ घरहरू वा शहरी शहरहरू (उनीहरू शहरको बीचबाट भएर जान्छन्) अत्यधिक आवाजबाट बच्न।
उदाहरणको लागि, हामी फेला पार्दछौं आवाज पर्दा। यी राजमार्गको किनारमा बनेका पर्खालहरू हुन् जसले उनीहरूबाट जाने आवाजलाई कम गर्दछ। शहरी वातावरणमा तिनीहरू रूख र झाडी पनि हुन सक्छन् जसले आवाज कम गर्न बाहेक, प्रदूषित हावालाई शुद्ध पार्दछ।
त्यहाँ नवीकरणीय उर्जाहरूको फाइदा लिन र विकास भइरहेको आवाजबाट बच्न परियोजनाहरू छन्। यो मोटरवेजमा सौर छतको बारेमा छ। सौर्य फोटोभोल्टिक कभरको साथ सडक, राजमार्ग र रेलवे कभर गर्नुहोस् यो पहिले नै अपरेसनमा अनौंठो स्थापनाको साथ एक विकल्प हो, जस्तो कि बेल्जियममा उच्च-स्पीड ट्रेन लाइनको मामला छ।
बिहान र साँझमा घामले गर्दा हुने उपद्रवलाई ठूलो मात्रामा रोक्न सकिन्छ, साथै रेगिस्तान र तातो देशहरू जस्ता उच्च इन्सोलेसनको क्षेत्रमा इन्जिनहरूको अत्यधिक ताप दिने शहरी क्षेत्रहरुमा उत्सर्जित आवाजलाई एकदम कम गर्नुहोस्। थप रूपमा, हामीसँग ऊर्जा योगदान छ जुन यसमा समावेश छ, एक नवीकरणीय, गैर-प्रदूषणकारी र कुशल स्रोतबाट आउँदछ।
तपाईंले देख्न सक्नुहुने रूपमा, आवाज मानव आँखाको लागि अदृश्य छ, तर यसको नतीजा गम्भीर छ। त्यसकारण अत्यधिक आवाजबाट बच्न हामीले स्वास्थ्य समस्या भोग्नुपर्दैन।
लेखको पूर्ण मार्ग: हरियो नवीकरणीय » वातावरण » ध्वनि प्रदुषण
केविन कारुएरो भन्यो
मेरो केसमा म प्राय: धेरै चर्को आवाजमा घण्टा हेडफोनको साथ संगीत सुन्थें र वास्तवमै म धेरै तनाव र धेरै चिन्तित थिएँ।
योगदानका लागि धन्यवाद, पेरूबाट बधाई!
केभिन कार्रुटिरोलाई जवाफ दिनुहोस्
म्याड्रिडले एक हवाको गुणस्तर सुधार योजना कोर्दछ
बैंकिया शाखाको ऊर्जा १००% अक्षय हुनेछ